ထုတ်ကုန်များ > Tetrahydro-4H-pyran-4-one (29943-42-8)
ကျနော်တို့ CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများအောက်တွင်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် Tetrahydro-4H-pyran-4-One (29943-42-8) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ် synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
Tetrahydro-4H-pyran-4-One (29943-42-8) အချိုးကျတဲ့ Tetra ၏ပေါင်းစပ်မီသိန်းအစားထိုး, 4-methoxytetrahydropyran-4-yl ကာကွယ်အုပ်စုတစ်စု၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်အသုံးချသည်။ အဆိုပါ methyl enol အီ 3,4-Dihydro-2H-pyran ကျော်အားသာချက်နှင့်အတူဘေ့ပေါင်းစပ်အတွက်ဥပမာ, အယ်လ်ကိုဟောများအတွက်အသုံးဝင်သောကာကွယ်အေးဂျင့်သည်။ ဒါဟာအစတစ်ခု ionic အရည်အတွက် nitrosobenzene နဲ့ L-proline နှင့်အတူ ketones ၏ enantioselective alpha-aminoxylation တစ်လေ့လာမှုမှာအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ dipeptides နှင့် spiroimidazolones ၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်ငွေ့ရည်ဖွဲ့တုံ့ပြန်မှုခြင်းကိုသည်းခံ။ ဒါဟာအစ penicillin များ၏ပေါင်းစပ်ဘို့တုံ့ပြန်မှု wittig နှင့်ဗီတာမင်၏လက်စွပ်တစ်ကွင်းအတွင်းအလုပ်ဖြစ်ပါတယ် D3
အဆိုပါ alkyl ဘေးထွက်ကွင်းဆက် termini မှာဝတ္ထု amphiphilic Poly (2-oxazoline) s ကိုဖြစ်စေသောစပါး L-prolinamide moieties တစ် Bottom-Up protocol ကိုကဒီဇိုင်းနှင့်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားပိုလီမာ prolinamide တက်ကြွအုပ်စုများ၏အများစုသည် hydrophobic အတွင်းအမာခံသို့တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်ခဲ့သည့်အတွက်ရေထဲမှာ 10-30 nm တစ်ဦးရဲ့အရွယ်အစားနှင့်အတူ micelle-type အမျိုးအစားအသင်းတော်များ, ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ တစ်ဦး nanoreactor သကဲ့သို့, micellar စနစ်များကိုအောင်မြင်စွာ aqueous မီဒီယာအတွက်တိုက်ရိုက်အချိုးမညီ aldol တုံ့ပြန်မှုမှလျှောက်ထားခဲ့သည်။ ရလဒ်ကသူတို့ monomeric အဆွေတော်နှင့် Non-amphiphilic ရည်ညွှန်းပေါ်လီမာနှင့်နှိုင်းယှဉ်အခါပေါ်လီမာ-ခညျြနှောငျ prolinamide အဖွဲ့ပေါ်ထွက်လာကို p-nitrobenzaldehyde မှ cyclohexanone ၏ကိုယ်စားလှယ် aldol အပြင်တစ်ဦးအလယ်အလတ် stereoselectivity နှင့်အတူဆန့်ကျင်ထုတ်ကုန်ကြှမျးက catalytic ထိရောက်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုပြသသောသရုပ်ပြ ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ Poly (2-oxazoline) အနကျအဓိပ်ပါယျလည်းမြင့်မားသောအထွက်နှုန်းနှင့်ကောင်းသော diastereo- နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာ aldol adducts ပေးရထိရောက်စွာ Tetrahydro-4H-pyran-4-One (29943-42-8) သို့မဟုတ် cyclopentanone အလှူရှင်များ၏တုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ် နှင့် enantioselectivities ။
InChI Key ကို JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N ကို
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 100.117
အပြုံး C1COCCC1 = အို
အရည်ပျော်မှတ် 165 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ° 167
(29943-42-8)GHS H ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
(29943-42-8)GHS P ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ကွာအပူ / မီးစများ၌၎င်း / ပွင့်လင်းမီးတောက်များ / ပူမျက်နှာပြင်ကနေထားပါ။ - ဆေးလိပ်မသောက်ရ။
မီး၏အမှု၌: သုဉ်းဘို့သုံးပါ: CO2, အမှုန့်သို့မဟုတ်ရေမှုန်ရေမွှား။
novel amphiphilic Poly (2-oxazoline) ထိုမှပါးအဖြစ်, L-prolinamide moieties ဆောင်သော s: Synthesis, aqueous aldol တုံ့ပြန်မှုအတွက် micellization နှင့် catalytic လှုပ်ရှားမှု
အဆိုပါ alkyl ဘေးထွက်ကွင်းဆက် termini မှာဝတ္ထု amphiphilic Poly (2-oxazoline) s ကိုဖြစ်စေသောစပါး L-prolinamide moieties တစ် Bottom-Up protocol ကိုကဒီဇိုင်းနှင့်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
polymer (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 2016
အစွမ်းထက် Anti-gram ပါအပြုသဘောဆောင်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်တိုးတက်လာသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုပရိုဖိုင်းကိုနှင့်အတူတ္ထု tetrahydropyran-based ဘက်တီးရီးယား topoisomerase inhibitors
မျိုးစုံခံနိုင်ရည်ရောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားကူးစက်ရောဂါဆန့်ကျင်ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းဝတ္ထု antibacterial မူးယစ်ဆေးဝါးများအရေးတကြီးလိုအပ်နေပါသည်။
Tetrahydro-4H-pyran-4-One (29943-42-8) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
အဘို့အ2ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Tetrahydro-4H-pyran-4-one (29943-42-8)
Apicmo မှာကျနော်တို့ synthesize နှင့် tetrahydro-4h-pyran-4-One အခြားဓာတုပစ္စည်းများအကြားအမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု system ပေါ်တွင်အခွခေံအဆိုပါ CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း။ 29943-42-8 heterocycles ကဲ့သို့တူညီသောကဏ္ဍကျရောက်ပါတယ်။
Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) ၏မူလတန်း applications များအချိုးကျတဲ့ Tetra-အစားထိုးမီသိန်း၏ 4-methoxytetrahydropyran-4-yl ကာကွယ်အေးဂျင့်နှင့်စုပေါင်းပြင်ဆင်နေကြသည်။
methyl enol အီအောက်ပါနယ်ပယ်များတွင်သက်ဆိုင်သည်:
အဆိုပါဒြပ်စင်သုတေသနနှင့် ketones ၏ enantioselective alpha-aminoxylation ၏လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးဝင်သည်။
ငွေ့ရည်ဖွဲ့အပေါ်သို့ spiroimidazoles နှင့် dipeptides ၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ
Wittig တုံ့ပြန်မှုအတွက် penicillin Synthesizing
ကျနော်တို့ alkyl ခြမ်းကွင်းဆက်အတွင်း theL-prolinamide moieties ဆောင်သောဝတ္ထု amphiphilic Poly (2-oxazoline) ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ရေအောက်မှာအကြောင်းမဲ့သောအခါ, ပိုလီမာ 10-30 nm ကြားကအထိ micelle-type အမျိုးအစားအသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရန်။ အဆိုပါ prolinamide တက်ကြွအုပ်စုများအများစုမှာ hydrophobic အတွင်းအမာခံအတွင်းတည်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်တစ်ခု aqueous မီဒီယာအတွက်တိုက်ရိုက်အချိုးမညီ aldol တုံ့ပြန်မှုဖို့ micellar စနစ်များကိုလျှောက်ထားခဲ့သည်။
ရလဒ်အနေဖြင့်ကျနော်တို့ပေါ်လီမာ-ခညျြနှောငျ prolinamide အဖွဲ့ပေါ်ထွက်လာ non-amphiphilic ပေါ်လီမာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထိရောက်မှုသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ monomeric ရှိသော counterpart တိုးတက်ကြောင်းကိုထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Poly (2-oxazoline) ၏အနကျအဓိပ်ပါယျတစ်သက်ဆိုင်ရာ aldol adduct ပေးခြင်း Tetrahydro-4H-Pyran-4-One ၏တုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်။ အထွက်နှုန်းပုံမှန်အားဖြင့်မြင့်မားသောကောင်းသော enantioselectivities နှငျ့အတူရှိ၏။
Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) ၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ
Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 29943-42-8
သိပ်သည်းဆ (ဆ / စင်တီမီတာ3) 1.065
IUPAC name ကို Oxan-
(ကို C °) Flash ကိုအမှတ် 55 - 63
ပွက်ပွက်ဆူနေသောအမှတ် (C) 165 - 167
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် (ဆ / mol) 100.052
နာမ် · Tetrahydro-4-pyranone
· 4H-Pyran-4-One, tetrahydro-
Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) ဓာတုနှင့်ကာယ Properties ကို
Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) ၏နိုင်မှု
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှောင်ကြိုး အလှူရှင်အရေအတွက် -none
လက်ခံသူအရေအတွက် -2 ယူနစ်
Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) တွက်ချက် Properties ကို
XLogP3-AA ကို -0.50
အခိုးအငွေ့ဖိအား (mmHg) 1.69 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 25
PSA 26.3 တစ် ^ 2
အတိအကျ Mass (ဆ / mol) 100.052
Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) Synthesis လမ်းကြောင်း
ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးငါးနည်းလမ်းများစဉ်းစားပါရကြလိမ့်မည်သော်လည်းအဆိုပါထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်လမ်းကြောင်း 14 အထိရှိပါတယ်။
ဒါဟာ 4-methoxytetrahydropyran-4-yl ကာကွယ်အုပ်စုတစ်စု၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့အလယ်အလတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အချိုးကျတဲ့ tetrasubstituted မီသိန်း Synthesizing
Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အန္တရာယ်
ထိုကဲ့သို့သောလာခြင်း, နာကျင်ခြင်း, အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်စူးရှ cyanosis အဖြစ်အသားအရေဓာတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
မူးဝြေခင်း, အသက်ရှုကြပ်, ပျို့, ဒါမှမဟုတ်အဆုတ်ဖောအပါအဝင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းယားယံ
စားသုံးမိအပေါ်သို့ကအန်မှဝမ်းလျှော, သို့မဟုတ် Central အာရုံကြောစနစ်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်
Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆောင်ရွက်ချက်များ
tetrahydro-4h-pyran-4-One သို့မဟုတ်အငွေ့၏မွှန်နှင့်အတူမတော်တဆအဆက်အသွယ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့သင့်လျော်သောအကာအကွယ်ဂီယာဝတ်ဆင်။ မိုးသည်းထန်စွာရော်ဘာလက်အိတ်, impervious ဖိနပ်များနှင့်မျက်နှာမျက်နှာဖုံးကိုသုံးပါ။ အဆိုပါမျက်နှာဖုံးလေထု filter များနှင့်သန့်စင်နဲ့အတည်ပြု Full-မျက်နှာအသက်ရှူကိရိယာတပ်ဆင်ထားရပါမည်။
1 ။ Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) အင်ဂျင်နီယာထိန်းချုပ်မှုများ
သင့်ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမီးသတ်ဘူး, အငွေ့ပါးပျဉ်း, ပရိသတ်တွေ, အိပ်ဇောလေဝင်လေထွက်, အဆင်ပြေဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းနှင့်လေထုသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်နှင့်အတူကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားရှိသင့်သည်။
အလုံအလောက်လေဝင်လေထွက်သို့မဟုတ်လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေနှင့်အတူတစ်ပွင့်လင်းသောဧရိယာမှသားကောင်လွှဲပြောင်းပါ။ အသက်ရှူအခက်အခဲများ၏အမှု၌, အတု respiration သို့မဟုတ်အောက်ဆီဂျင်ထောက်ပံ့မှုကိုစီမံခန့်ခွဲ။ အရေးပေါ်အတိုင်းအတာပျက်ကွက်လျှင်ဆေးဝါးကုသမှုထောက်ခံမှုရယူပါ။
အကြောင်းကို 15 မိနစ်ရေနှင့် Non-ပွန်းဆပ်ပြာ၏ပဒေသာနှင့်အတူချက်ချင်းဧရိယာဆေး။ အဝတ်အတွက် spillages ရှိပါက, သူတို့ကိုပယ် ယူ. ပြန်သုံးမတိုင်မီဆေးကြောပါ။ နာကျင်ခြင်းဆက်ရှိနေသေးလျှင်ထပ်မံဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြလော့။
အကြောင်းကို 15 မိနစ်ဘို့ရေကိုအများကြီးနှင့်အတူမျက်စိဆေးကြောပါ။ ရောဂါလက္ခဏာများဆက်လက်ရှိလြှငျဤအမြဲတမ်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်ကတည်းကဆရာဝန်တစ်ဦးထံမှအကူအညီရှာကြလော့။
သားကောင်သတိလစ်လျှင်ချက်ချင်းဆေးကုသရှာကြလော့။ ဘယ်အချိန်မှာသတိ, နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နှုတ်တော်ထွက်အလျှော်ရေသို့မဟုတ်နို့တစ်နှစ်ခွဲလီတာသောက်လော့။ အန်သွေးဆောင်ကြိုးစားခဲ့ပါဘူး။
3 ။ Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) သိုလှောင်ရေး
29943-42-8 တစ်ဦးကမီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့အရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ပျောက်ဖွင့်ထားမီးတောက်, မီးစများ၌၎င်း, အပူ, ဒါမှမဟုတ်စက်နှိုး၏အခြားမည်သည့်အလားအလာအရင်းအမြစ်ကနေစောင့်ရှောက်ရန်အာမခံပါသည်။ အဆိုပါသိုလှောင်မှုအခြေအနေအအေးဖြစ်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်အများဆုံးလေဝင်လေထွက်ခံယူသင့်ပါတယ်။ အခန်းအပူချိန်အတွင်းအကောင်းဆုံးကတော့, storeTetrahydro-4H-Pyran-4-တပါးတည်း။
4 ။ Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) ကိုင်တွယ်မှု
အငွေ့, အငွေ့, ဒါမှမဟုတ်ဖုန်မှုန့်ဓာတ်များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ
မျက်စိကိုသို့ရတဲ့ထံမှ Tetrahydro-4H-Pyran-4-One, အသက်ရှူလမ်းကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်အရေပြားကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများဝတ်ဆင်
အဆိုပါပေါက်ကွဲ tools တွေနဲ့အတူဓာတု, အပူ, ဒါမှမဟုတ်မီးတောက်မသုံးပါနဲ့
လုံခြုံရေးရေချိုးခန်းနှင့် eyewash ၏ရရှိမှုသည်သင်၏အလုပ်လုပ်ဧရိယာထဲမှာရှိမယ့်သေချာ
5 ။ Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) ကို အသုံးပြု. ပြီးနောက်
6 ။ Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) မတော်တဆဆောင်ရွက်ချက်များ
အဆိုပါယိုဖိတ်မှုဖွင့်စိမ်ပြီးတံဆိပ်ကပ်စွန့်ပစ်ကွန်တိန်နာထဲမှာဆမ်းဖို့အစွမ်းမဲ့စုပ်ပစ္စည်းကိုသုံးပါ။ ပွဲချင်းပြီးထလျှော်ကြောင့်လေခတ်လျက်, အငွေ့လျှော့ချဖို့တစ်ငွေ့-နှိမ်နင်းကိုအသုံးပြုပါ။ ဒေသခံသို့မဟုတ်ပြည်နယ်၏စွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းစည်းမျဉ်းများအရသိရသည်ရဲ့ contents များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
မီးဖြစ်ပွား၏အမှု၌, အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အတူ Tetrahydro-4H-Pyran-4-One ၏ flame.A ပေါင်းစပ်ထုတ်ချပြီးမတိုင်မီအကာအကွယ်အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြိုကွဲအပေါ်သို့အဆိပ်အတောက်အငွေ့ generate လိမ့်မည်။ ရေမှုန်ရေမွှားခြောက်သွေ့မှုန့်, ရေမြှုပ်, ဒါမှမဟုတ် CO ကိုသုံးပါ2 ဓါတ်ငွေ့။
7 ။ Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) ၏တည်ငြိမ်မှုကို
သာမန်ဖိအားနှင့်အပူချိန်နှင့်အတူစံအခြေအနေများအောက်တွင်, Tetrahydro-4h-pyran-4-One အတော်လေးတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားကြီးသောဓာတ်အေးဂျင့်များ, အက်ဆစ်သို့မဟုတ် basesmay ခလုတ်ပြိုကွဲဖို့ exposure ။ ဒါဟာကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်, CO သို့ decomposes2နှင့်အခြားစိတျဆိုးဓာတ်ငွေ့။
8 ။ 29943-42-8 စွန့်ပစ်ရှင်း
အထူးစွန့်ပစ်အဖြစ် ConsiderTetrahydro-4H-Pyran-4-One နှင့်ဒေသခံဖက်ဒရယ်နှင့်ဒေသခံစည်းမျဉ်းနှုန်းများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ သင်တို့သည်လည်းဓာတုမီးရှို့ဖျက်ဆီးထဲမှာမီးလောင်သောအားဖြင့်ထုတ်ကုန်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။
9 ။ Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) သင်္ဘောအင်ဖို
တစ်ဦးမီးလောင်လွယ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ခြင်း, Tetrahydro-4H-Pyran-4-One သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိဖြစ်လိမ့်မယ်။ ရလဒ်အဖြစ်အဆိုပါရေကြောင်းစွဲချက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်လိမ့်မယ်။
Tetrahydro-4H-Pyran-4-One ကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာအားလုံးဒေသခံများနှင့်ဖက်ဒရယ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများ, ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုစောင့်ရှောက်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံသိပ္ပံပညာရှင်များသုတေသန, အသက်နှင့်ပစ္စည်းသိပ္ပံ, ဓာတုပေါင်းစပ်, analysis နှင့် Chromatography ပါဝင်သောအားလုံးဒေသများရှိ excel ။
Tetrahydro-4H-Pyran-4-One (29943-42-8) အစုလိုက်အမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း
Tetrahydro-4h-pyran-4-One သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဓာတုပေါင်းစပ်ဘို့တင်းကြပ်စွာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအမြောက်အများ၌ဤထုတ်ကုန်လိုအပ်ခဲ့လျှင်တစ်ခုအမိန့်စေရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem ၏အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် Tetrahydro-4H-Pyran-4-one (29943-42-8) ကဏ္ဍများ 1-10 ။
Conrad Weygand, Wiley, 1972 Weygand / Hilgetag ပြင်ဆင်မှုအော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ, စာမျက်နှာ 257-235
Janice G. အ Smith က McGraw-Hill က, 2008 - ဓာတုဗေဒ, အော်ဂဲနစ်, စာမျက်နှာ 12-17
အကောင်းဆုံး Tetrahydro-4H-pyran-4-One နဲ့ကိုယ့်အစဉ်အဆက်ခဲ့ကြဝန်ဆောင်မှု, Nice အတွေ့အကြုံကို